Hubaanti la'aaanta Wenger 'ma saamaynayso ciyaartoyda' - BBC News Somali
Hubaanti la'aaanta Wenger 'ma saamaynayso ciyaartoyda'
Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa sheegay in hubaanti la'aanta mustaqbalkiisu aysan saamaynaynin ciyaartoydiisa, laakiin wuxuu qirtay in guuldarradii 3-0-ta ahayd ee ka soo gaartay Crystal Palace ay tahay "wax aad looga walwalo".
Wenger ayuu qandaraasku ka dhamaanayaa gabogabada xilli ciyaareedkan waxaana loo soo bandhigay qandaraas cusub oo labo sano ah, inkastoo uusan wali shaacinin in uu shaqadan sii wadan doono iyo in kale.
Arsenal oo kaalinta lixaad ku jirta ayaa todobo dhibcood ka hoosaysa kooxda ku jirta kaalinta afraad, waxaana u dhiman siddeed ciyaarood.
"Waxaan Arsenal layliyay 1,100 oo ciyaarood sidan oo kalana naloogama badin jirin," ayuu yiri tababaraha Arsenal.
"Mana aha in aan arrintaas aqbalno ee waa in aan si degdeg ah uga jawaabnaa."
Qaar ka mid ah taaageerayaasha kooxda la safray ayaa Wenger u sheegay in la joogo wakhtigii uu Wenger shaqada ka tagi lahaa.
Goolal ay kala dhaliyeen Andros Townsend, Yohan Cabaye iyo Luka Milivojevic ayaa Arsenal u horseeday badintii afraad ee xiriir ah ee soo wajahda 21 xilli ciyaaareed ee uu Wenger kooxda maamulkayay.
Guuldaradaas ayaana kooxda galisay khatar ah in markii koobaad ay ka xilli ciyaareedkan ku dhamayn waayaan afarta kaalmood ee ugu horeeya Horyaalka Ingiriiska tan iyo intii uu kooxda laylinayay 67 jirkan reer Faransiis.
"Waan dareemi karaa oo taageerayaashu wajigabax ayay la kulmeen, dhamaantanna waji gabax ayay si wayn noogu noqotay.
Tababaraha Arsenal: "Waan ka qoomamooday" in aan riixay Anthony Taylor
Mourinho oo markale laga saaray garoonka lana ganaaxay